भारतमा लोकतन्त्रको महासंग्राम, जनताको आत्महत्यामाथि मोदी भर्सेस गान्धी ! « Kathmandu Pati
प्रकाशित मिति : २०७५, २८ चैत्र बिहीबार ०९:५८
काठमाडौं – पुरानो लोकतन्त्र भएको देश भारतमा बिहीबारदेखि आमनिर्वाचन शुरू हुँदैछ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मताधिकार प्रयोग गर्न समय नजिकै पुग्दा र आफ्नो नेता छान्न पाउँदा हर्षित हुनुपर्नेमा दुःखद घटना सुनिएका छन् ।
बिहीबारबाट शुरू हुने निर्वाचन सात चरणमा हुने गरी तोकिएको छ । पहिलो चरणमा बिहीबार २० प्रदेशका ९१ सीटमा मतदान हुँदैछ ।दोस्रो चरणमा १८ अप्रिलमा १३ प्रदेशका ९७ सीटमा मतदान हुनेछ । तेस्रो चरणमा २३ अप्रिलमा १४ प्रदेशका ११५ सीटमा मतदान हुनेछ भने चौथो चरणमा २९ अप्रिलमा ९ प्रदेशका ७१ सीटमा मतदान हुनेछ ।
कसको छ पल्ला भारी ?
तर त्यो असन्तुष्टिबाट कांग्रेसले फाइदा लिन सक्ने पनि स्पष्ट चित्र देखिएको छैन । चुनावअघि भएका सर्वेक्षणले केही कमजोर अवस्था भएपनि भाजपाले नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने विश्लेषण गरेका छन् । मोदीको पुनरावृत्ति नै भारतका अधिकांश मतदाताको मूड रहेको विश्लेषण गरिएको छ । नरेन्द्र मोदीको उदय हुनुअघि कांग्रेसको पालामा मनमोहन सिंहले दुई पटक सत्ता सम्हालेका थिए । यसपटक नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हाल्ने अवसर पुनः पाउने अनुमान गरिएको छ ।
टिचिङका ३८ जना चिकित्सक र नर्सलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो
काठमाडौं – शल्यक्रिया गर्न भर्ना भएकी ६ वर्षीया बालिकालाई कोरोना
मन्त्रालयले सच्यायो विवरण, कोरोना संक्रमितको संख्या २४५ मात्रै
काठमाडौं – स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २४५